Gary Lineker oo hadal cajiib ah sheegay inkasta uu xulka qaranka England ka haray koobka aduunka 2018 – Gool FM
Gary Lineker oo hadal cajiib ah sheegay inkasta uu xulka qaranka England ka haray koobka aduunka 2018
(Russia) 12 Luulyo 2018. Halyayga reer England Gary Lineker ayaa kaga hambalyeeyay ciyaartoyda xulka saddexda Libaax in ay gaareen wareega afar dhamaadka koobka aduunka 2018 ee haatan ka socda dalka Russia.
Hamabalyada Gary Lineker uu u diray xulka qaranka England ayaa waxay imaaneysaa xili ay ka hareen koobka aduunka kadib guuldaradii ay kala kulmeen dhigooda Croatia oo ugu awood sheegtay 2-1.
Gary Lineker ayaa kusoo qoray bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka qoraal hambalyo ah ee ku aadan wiilasha England.
“Waa arin naxdin leh, laakiin dhalinyarada waxay la yimaadeen wax walba, waa talaabo weyn oo horey loo sii wanaajin karo mustaqbalka”.
“Waa in ay madaxdooda kor u qaadaan, sababtoo ah waxaa ku faanaya waddankooda”.
Waxaa xusid mudan in xulka qaranka England uu heerkan kasoo gaaray koobka aduunka marka ugu horeesay mudo haatan laga joogo 28 sano, laakiin wuxuu ku guuldareestay inuu gaaro finalka markiisii labaad ee taariikhda kadib markii ay guuldaro 2-1 kala kulmeen Croatia.
Cristiano Ronaldo oo kala hadlay madaxweynaha kooxda Juventus fikirkiisa kaga aadan Gonzalo Higuain
“Waxaan ka lunay wadada kadib marka ay Croatia la timid goolka barbaraha”… Gareth Southgate.